Na-ekwu maka ihe kpatara ewu ewu nke ime ụlọ obere ihe ngosi LED - JYLED
Mbido » Na-ekwu maka ihe kpatara ewu ewu nke ime ụlọ obere oghere LED ngosi
Na-ekwu maka ihe kpatara ewu ewu nke ime ụlọ obere oghere LED ngosi
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ime ụlọ obere-pitch LED ngosi apụtawo n'etiti ọtụtụ ngosi, na-eburu ọtụtụ n'ime ahịa ngosi eletrọnịkị LED. Obere pitch, dị ka aha ahụ na-egosi, pụtara na ntụpọ ntụpọ nke ihuenyo dị ntakịrị na mkpebi nke otu mpaghara dị elu. Nnukwu asọmpi nke ime ụlọ elu-njupụta LED ngosi bụ na ngosipụta ahụ enweghị nkebi kpamkpam yana agba eke na ezi agba nke ngosi ahụ. Ọtụtụ mgbe, ebe dị anya n'etiti bead oriọna na-erughị milimita abụọ ka a na-akpọ obere pitch, ya mere ụdị ngosi a nwere ike igosi ihe oyiyi na vidiyo dị elu, ma nwee ike igosikwu vidiyo na ihe oyiyi.
Ngosipụta ihuenyo ime ụlọ obere pitch LED
Yabụ kedu ihe kpatara ngosipụta ọkụ ọkụ dị elu nke ime ụlọ ji ewu ewu? Gịnị bụ ihe omimi ya? Taa, ka anyị soro ka anyị chọpụta ihe pụrụ iche gbasara ihe ngosi LED nke obere oghere ultra-clear.
1. Ultra-elu-definition zuru okè foto àgwà, enweghị nkebi stitching, nanị visual oriri
The splicing nnukwu ihuenyo technology na-enweghị ike zere mmetụta nke anụ ahụ etiti mgbe ọ na-egbo mkpa nke ndị ahịa ruo n'ókè kasị ukwuu. Ọbụlagodi na ihuenyo LCD ọkachamara ultra- warara-ọnụ ka nwere oghere splicing doro anya, naanị ihe ngosi LED na-eme ka enweghị nkebi splicing enweghị nkebi. Seam chọrọ, uru nke elu-njupụta obere-pitch LED a na-egosipụta splicing enweghị nkebi.
2. High ihie nwere ọgụgụ isi mgbanwe
Ihuenyo LED n'onwe ya nwere nchapụta dị elu. Iji mejuo mmetụta nlele ahụ dị mma maka onye na-ekiri ya na gburugburu ọkụ siri ike na gburugburu ìhè gbara ọchịchịrị, ma zere ike ọgwụgwụ anya, enwere ike imezi nchapụta ahụ na usoro nhụta ìhè.
3. Ọkwa isi awọ dị elu maka ịrụ ọrụ agba ka mma
Ọbụlagodi na arụmọrụ grayscale nke ihuenyo ngosi fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke na nchapụta dị ala, akwa akwa na ịdị ọcha nke eserese a gosipụtara dị elu karịa nke ihuenyo ngosi ọdịnala, ọ nwekwara ike igosi nkọwa onyonyo ọzọ na enweghị mfu ozi.
Ime ụlọ obere pitch LED ngosi ihuenyo eletrọnịkị
4. Ọdịiche dị elu, ọsọ nzaghachi ngwa ngwa, ọnụego ume ọhụrụ dị elu
Ọnụ ọgụgụ nke oge ọkụ eletrik na-enyocha ihe oyiyi ahụ ugboro ugboro na ihuenyo, ọnụ ọgụgụ nke nyocha dị elu na ọnụ ọgụgụ ume ọhụrụ dị elu, na-eme ka nkwụsi ike nke onyinyo ahụ dịkwuo mma. Ka ọ̀tụ̀tụ̀ ume ọhụrụ ahụ dị ala, ka ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ́ ma na-ama jijiji karị, na anya ahụ na-adịkwa ngwa ngwa. Ihuenyo ime ụlọ nke obere ihe ngosi LED N'okpuru ọnụego ume ọhụrụ dị elu, onyonyo a kpụrụ akpụ kwụsiri ike, enweghị ihuenyo ojii na-agba agba, akụkụ onyonyo doro anya, wee weghachi ezigbo ozi nke onyonyo a.
5. Igbe aluminom-magnesium-zinc alloy ultra-high-tech bụ ihe siri ike karịa aluminom ma na-eguzogide ọgwụ karịa ígwè.
6. Multifunctional njikọ, ngwa ngwa, dị mfe na adaba.
Ultra-light na ultra-thin: ọkpụrụkpụ nke igbe ahụ bụ naanị 42mm, nke dị mfe ịwụnye.
Gịnị bụ ojiji nke obere-pitch LED ngosi?
1. Nleba anya nchekwa: Site na njirimara nke enweghị nkebi, arụmọrụ agba mara mma, na ike dị ala, obere ihe ngosi eletrọnịkị LED nwere ike izute iwu na ebe izipu, ebe iwu na njikwa, ụlọ ọrụ redio na telivishọn, na ozi ihu igwe nke chọrọ ogo onyonyo dị elu. Mkpa nke ngwa ime ụlọ dị elu dị ka etiti.
2. Ngosipụta ihe ngosi: The Ihuenyo ngosi nke obere oghere LED nwere usoro mgbakọ na-agbanwe agbanwe, akụkụ nlele obosara, ahụ dị oke mkpa, ntinye na nhazi ngwa ngwa na ngwa ngwa, yana ike dị ala. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe ngosi mgbasa ozi ọha dị iche iche, dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọdụ ụgbọ elu, akwụkwọ akụkọ ozi maka sinima, ụlọ ọgwụ, wdg, yana nkwalite ihe oyiyi ụlọ ọrụ, ihe ngosi ihe ngosi omenala ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, akara ngosi stadium, wdg.
3. Mmụta azụmahịa: Obere-pitch LED ngosi nwekwara ike gboo mkpa nke dị iche iche azụmahịa ubi, dị ka ụlọ ọrụ ogbako, ụlọ ọrụ onyeisi oche, netwọk video ogbako, wdg, na ike dochie projectors ka ike a na-egbuke egbuke ụlọ ọrụ gburugburu ebe obibi.
Ọrụ nkwado bọọdụ elektrọnik bara ụba nwere ike gboo mkpa ngosi ozi nke ụlọ akwụkwọ dị iche iche na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. E jiri ya tụnyere ndị na-eme ihe nkiri ọdịnala, bọọdụ ọcha elektrọnik na ngwaahịa ndị ọzọ, ihe ngosi LED pere mpe na-adaba adaba iji wụnye na idobe ya, ọkachasị njirimara ọkụ onwe ha, nke nwere ike gboo mkpa nke ụlọ ogbako na-egbuke egbuke, klaasị, wdg.
4. Ebe obibi: Ọganihu nke ịdị mma nke foto a na-eme ka ngwa ime ụlọ nke ihe ngosi LED kwe omume. Site na nkwalite teknụzụ ngosi na-aga n'ihu, TV LED dabere na teknụzụ ngosi ngosi LED pere mpe apụtala. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ngosi LED abanyela n'ahịa a, na-aga n'ihu na-amụba nyocha na mmepe nkà na ụzụ, na-eme ka ọsọ ọsọ nke ịbanye n'ọhịa ngwa ngosi ụlọ.
Ka ọ dị ugbu a, LCD TVs, projectors na akụrụngwa ndị ọzọ na-achị n'ihe gbasara ngwa ụlọ. Dị ka ezinụlọ, uru a ma ama nke LED TV bụ na ọ na-enweta teknụzụ na-enye onwe ya, na nchapụta ya, agba ya na ọnụego ume ọhụrụ nwere uru karịa LCD TV. Ọ na-adaba adaba karịa ndị na-emepụta ihe n'ihe gbasara ntinye na nhazi, ọ dịghịkwa mkpa ịdabere na ihuenyo ntule, ya mere enwere ike igosi ya nke ọma ọbụna n'ime ụlọ na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke.
NgaGịnị bụ mmepe ọnọdụ nke p2 LED obere pitch ngosi na iwu na izipu center ahịa?
OsoteKedu ihe bụ ihe ngosi eduzi obere ime ụlọ yana ihe eji ya
Mpụta nke Ihuenyo abnormity nke ikanam agbajila njedebe nke sistemu enyo enyo ọdịnala nke enwere ike kewaa n'ụdị dị mfe. Ọ nwere ike
Ugbu a, mgbe ọtụtụ ndị ahịa na-ajụ banyere P3.91 LED transperent ihuenyo, ha na-ajụkarị maka pasent nke nnyefe ọkụ nke ngosi. Nke a
Ngosipụta P2.976 transperent LED bụ ịdị adị pụrụ iche na ngosipụta LED. Gịnị mere i ji kwuo otú ahụ? Nke a bụ n'ihi na Ọdịdị nke uzo
Site na mmụba nke ihe ndị mmadụ chọrọ maka ịdị mma foto, obere ihe ngosi ngosi nke nta na nta aghọwo ihe na-elekwasị anya n'ọtụtụ ndị mmadụ. Maka